China High Precision Infrared Thermopile Sensor maka Non-kpọtụrụ okpomọkụ Mmesho STP9CF55H emepụta na suppliers | Anwu
STP9CF55H infrared thermopile sensor maka eriri igwe na-abụghị kọntaktị bụ ihe mmetụta thermopile
mgbochi mgbochi nnyonye anya imewe, STP9CF55H siri ike maka ụdị ngwa ngwa ọ bụla.
The STP9CF55H gụnyere ụdị ihe ọhụrụ CMOS ọhụrụ na-arụ ọrụ na-enye ezi uche,
obere ọnụọgụ ọnụọgụ nke mmetụta uche yana nnukwu nrụpụta na ntụkwasị obi. A-elu-nkenke
A na-ejikọkwa mgbawa na-ekpo ọkụ na thermistor maka ịkwụ ụgwọ ọnọdụ okpomọkụ.
STP9CF55H siri ike infrared nwere ihe nha okpomoku nke 0.05 ℃. (Nlekọta ihe nlele ahụike ahụike na-abụkarị naanị mkpa ± 0.2 ℃). Ọ na - anabata ikike izizi nke onwe na teknụzụ mmepe, yana ihe nchọpụta ọnọdụ gburugburu ebe obibi ihe mmetụta ziri ezi karịrị 15 ugboro karịa ngwaahịa ndị ọzọ yiri ya (izi ezi sitere na 3% ma ọ bụ 5% ruo 0.2%).
Ihe mmetụta ahụ nwere ọtụtụ ngwa ngwa, a na-ejikarị ya na nha ihu igwe na-enweghị kọntaktị, thermometers ntị, Igwe ihu ihu ihu, na-aga n'ihu njikwa njikwa nke n'ichepụta, ngwa ndị ahịa na njiri ụlọ ọkụ.
Nchegbu dị n'elu ogo kachasị nwere ike imebi ngwaọrụ ahụ. Ekpughela onye nchoputa na ihe nchapu ihe dika Freon, Trichlorethylene, wdg. Windows nwere ike kpochapu ya na mmanya na swab. Enwere ike iji aka ọkụ na 260 Celsius C mee ihe maka ịgbanye aka na ntụgharị. Zere ikpo ọkụ na elu na windo nke nchọpụta. Reflow soldering adịghị atụ aro ya.
Akwa responsivity, High Signal-Noise ruru
Obere size, elu pụrụ ịdabere, 4-pin metal ụlọ TO-46
Ọnọdụ Okpomọkụ Na-arụ Ọrụ: −40 ℃ to + 125 ℃
Mgbochi mgbochi electromagnetic
Pyrometer, Igwe Igwe Igwe Igwe, Igwe temometa, Wet temometa
Pin Nhazi & Ndepụta ngwugwu
Nke gara aga: Ihe mmetụta infrared Thermopile maka Mmetụta Ọkụ Na-enweghị Mkparịta ụka STP9CF55
Osote: Ihe mmetụta IR Thermopile maka Nchọpụta Ọrịa Ahụ Kpọtụrụ Onye na-enweghị STP9CF55C
Smd Thermopile mmetụta
Mkpokọta Igwe Igwe Igwe Igwe
Okpomọkụ Thermopile Sensọ
N'elu nọkwasịrị n'ịnyịnya na Sensọ maka Contactless Isi ...
Isi okpomọkụ Contactless nchọpụta Infrared ...
Contactless High ziri ezi Thermopile Infrared S ...
Na-enweghị kọntaktị Thermopile IR Sensor maka Temperatur ...
Kpọtụrụ okpomọkụ okpomọkụ na-atụ temometa w ...
Digital Isi okpomọkụ Atụ Non-kọntaktị ...